MM FOODBALL NEWS
BBC FOODBALL RESULTS
ကရင်လူမျိုးတို့တွင် နေထိုင်ရာဒေသ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကိုလိုက်၍ အမျိုးမျိုးသောစာပေများ ပေါ်ထွက်ခဲ့လေသည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် သုတေသီများ၏လေ့လာတွေ့ရ...
Google Talk ကနေ ကျီမေးလ်ထဲကိုသွားချင်သူများ မေးလ်ဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်း Internet Explorer ပဲပေါ်နေမယ်ဆိုရင် ကျနော်အောက်ကအတိုင်းပုံစံလေးနဲ့ရ...
ကရင်လူမျိုး၏ မူလဇာစ်မြစ် (၆)
ကရင်လူမျိုး၏ မူလဇာစ်မြစ် (၅) သုတေသနစာတမ်း စောဖော (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) ကရင်လူမျိုးများ မြစ်နှစ်မွှာဒေသ၊ မြေထဲပင်လယ် ဘက်မှ အရှေ့တောင်အာရှဘက်သို့...
Folder မ Lock ဘဲနဲ Folder ဖျောက်ကြမယ်
Folder မ Lock ဘဲ့နဲ့ Folder ဖျောက်မယ် ကဲ စာဖတ်သူတို့ရေ..ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ Folder မ Lock ဘဲ့နဲ့ Folder ဖျောက်မယ်တဲ့ ။ ဟီး ဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်...
About Gmail Password
About Gmail Password အခုဖြေရှင်းပေးနေရတဲ့ပြသနာလေးတွေပါ တစ်ယောက်လာပီးပြောသွားလိုက် နှစ်ယောက်လာပီးပြောသွားလိုက်နဲ့ နဲ့မလို့ပါ တစ်ယောက်လာပြေ...
Google Talk ကနေ ကျီမေးလ်ထဲကိုသွားချင်သူများ မေးလ်ဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်း Internet Explorer ပဲပေါ်နေမယ်ဆိုရင် ကျနော်အောက်ကအတိုင်းပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြပါမယ်။
M နှိပ်လိုက်လို့ မေးလ်ထဲမရောက်ပဲ Internet Explorer ထဲပဲရောက်နေရင် အရင်ဆုံး မိမိMozilla Firefox ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Tools ကိုနှိပ်ပြီး Options ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်အောက်ကပုံအတိုင်း
Advanced ကကိုရွေးလိုက်ပါ ပြီးရင် အောက်မှာ Always check to see if Firefox is the default browser on startup မှာ အမှတ်ပြုတ်နေလို့ပါ။ အဲဒါကိုပြန်တပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် 0k ပေါ။
Posted by လါပုင်းဖါန် at 12:43 AM
ကရင်လူမျိုးတို့တွင် နေထိုင်ရာဒေသ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကိုလိုက်၍ အမျိုးမျိုးသောစာပေများ ပေါ်ထွက်ခဲ့လေသည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် သုတေသီများ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးက တီထွင်ရေးသားခဲ့သော စာပေရေးနည်းများ(၉)မျိုးရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် အချို့သောစာပေများသည် ထွန်းကားကျယ်ပြန့်၍ ထင်ရှားခြင်း ရှိလေသည်။ ဖော်ပြပါ လေ့လာတွေ့ရှိရသော စာပေ (၉) မျိုးကို ဖော်ပြရသော်….
ထိုစာပေသည် ဖလုံ (ပိုးကရင်) တို့က `လိက်ထူ့လီ´ ရှေးဟောင်းစာပေအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ ယင်းစာပေကို သထုံဘုရင်၊ မနူဟာမင်ကြီးထံပါး ခစားရသော ကရင်အမျိုးသား ပညာရှိ `မွန်ဒိင်´ အမည်ခေါ် `ဖူ့ဒိုက်ကော်´ က တီထွင်ရေးသားခဲ့သည်။
ထိုစာပေသည် အမေရိကန်သာသနာပြု ဒေါက်တာ ဂျွန်နသန်ဝိတ် က ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၃၂-ခုနှစ်တွင် မြန်မာအက္ခရာကိုမှီး၍ တီထွင်ရေးသားခဲ့သည်။ ဗျည်းအက္ခရာ (၂၅) လုံးနှင့် သရ (၉) လုံးပါဝင်သည်။
(၃)- နှစ်ခြင်းဘာသာဝင် ပိုးကရင်စာပေ
ထိုစာပေကိုလည်း ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၃၂-ခုနှစ်၊ ဒေါက်တာ ဂျွန်နသန်ဝိတ် ကပင် ရေးသားခဲ့သည်။ ဗျည်း (၂၆) လုံးနှင့် သရ (၁၀) လုံးပါဝင်သည်။ ထိုစာရေးနည်းမှာ ခေါမ၊ ရောမနှင့် အမျိုးအမည် မကွဲပြားသောအက္ခရာများ ပါဝင်နေသဖြင့် ဖတ်မှတ်ရာတွင် မလွယ်ကူခြင်း၊ ကရင်အများစုကလည်း မကြိုက်မနှစ်သက်ခြင်းရှိရာ နှစ်မကြာမီ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။
(၄)- ရောမအက္ခရာ စကောကရင်စာပေ
ထိုစာပေသည် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၃၂-ခုနှစ်တွင် ဒေါက်တာ ဂျွန်နသန်ဝိတ် ရေးသားတီထွင်ခဲ့သော စကောကရင်စာပေကိုမှီး၍ ဆရာထွန်းမြက တီထွင်ရေးသားပြီး ကရင်ရေးရာ ပညာရေးအရာရှိချုပ် စောဘထွန်းတင်က စိစစ်ပြင်ဆင်သော ရေးသားနည်းဖြစ်သည်။ ယင်းစာပေသည် ဗျည်းအက္ခရာ (၂၆) လုံးနှင့်
သရ (၉) လုံးပါဝင်သည်။
(၅)- မြန်မာအက္ခရာကိုအခြေခံသော ပိုးကရင်စာပေ
ထိုစာပေသည် ဒေါက်တာ ဂျွန်နသန်ဝိတ် တီထွင်ရေးသားခဲ့သော ပိုးကရင်စာကို ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၅၂-ခုနှစ်တွင် ဒေါကတာ အယ်လ် ဘရေတန်က မြန်မာဗျည်းအက္ခရာများကို မှီးယူ၍ တီထွင်ရေးသော စာပေဖြစ်သည်။ ဗျည်း (၂၆) လုံးနှင့် သရ (၁၀) လုံး ပါဝင်သော်လည်း နောင်အခါတွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်၍ ဗျည်း (၂၇) လုံး ရှိလာလေသည်။
(၆)- ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်စာပေ
ထိုစာပေကို ကော့ကရိတ်မြို့၊ မင်္ဂလာဇေယုံကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီး ဦးနန္ဒမာလာက သက္ကရာဇ် ၁၂၉၁-ခုနှစ်၊ ခရစ်နှစ် ၁၉၃၀-ခုနှစ်တွင် ကျုံဒိုး ဇမ္မသုခကျောင်း၌ တီထွင်းရေးသားခဲ့သည်။ ဆရာတော် တီထွင်ရေးသားသောစာသည် ပိုးကရင်၊ စကောကရင် ၊ ကရင်နှစ်မျိုးလုံးဖတ်ရှုနိုင်ပြီး မြန်မာ၊ မွန်၊ ရောမအက္ခရာကိုမှီး၍ ရေးသားခဲ့သည်။ ဗျည်း (၃၈) လုံးနှင့် သရ (၂)လုံး ပါဝင်သည်။
(၇)- ဗုဒ္ဓဘာသာ စကောကရင်စာပေ
ထိုစာပေသည် ဘားအံမြို့နယ်၊ မုက္ကဒိကျေးရွာအုပ်စု၊ ကမ်းကြီးရွာ၊ မြိုင်သာယာဆရာတော် ဦးသာဂရ တီထွင်ရေးသားသော စာရေးနည်းဖြစ်သည်။ ပထမတန်းမှ ဆဋ္ဌမတန်းအထိ ကျောင်းသုံးစာအုပ်များပြုစု၍
(၈)- ဗရင်ဂျီဘာသာ စကောကရင်စာပေ
ထိုစာပေသည် ပြင်သစ်လူမျိုး အက်ဒွပ်ကဲလ်မင်းနှင့် ဗရင်ဂျီဘာသာဝင် စကောကရင်အမျိုးသား ဆရာကျော်စိန်တို့က ရောမအက္ခရာကို အသုံးပြု၍ တီထွင်ရေးသားခဲ့ပြီး ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၅၄-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ယိုးဒယားပြည်၊ ဘန်ကောက်မြို့၌ ပုံနှိပ်ိထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဗျည်းအက္ခရာ (၂၀) လုံးနှင့်
သရအက္ခရာ (၉) လုံး ပါဝင်သည်။ ထိုစာရေးနည်းကို ဖာပွန်ဒေသနှင့် ယိုးဒယားနယ်တို့တွင် သင်ကြားကြပြီး
ယိုးဒယားနယ်တွင် ပို၍ ထွန်းကားလာကြောင်း သိရသည်။
(၉) လဲကယ်ဘာသာ `လိုက်ဆန်ဝှေ့´
လဲကယ်ဘာသာကိုးကွယ်သော ပိုးကရင်တို့၏ `လိက်ဆန်ဝှေ့´ ခေါ် ကြက်ယက်စာပေဖြစ်သည်။ ထိုစာပေအား သက္ကရာဇ် ၁၂၀၈-ခုနှစ်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၄၆-ခုနှစ်တွင် ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ဖူ့ကျာ်သောင်လျှက်ကလည်းကောင်း၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ နှစ်ခြားရွာ ဦးမောင်ထိုင်ကလည်းကောင်း၊ တီထွင်ရေးသားခဲ့ကြောင်း အဆိုနှစ်ရပ်ရှိလေသည်။ ထိုစာရေးနည်းအား သက္ကရာဇ် ၁၂၂၂-ခုနှစ်၊ ခရစ်နှစ် ၁၈၆၁-ခုနှစ်တွင် နှစ်ခြားရွာ လဲကယ်ဘာသာဝင်ခေါင်းဆောင် `ဖိမိုက်ကာလီ´ က ပုရပိုက်ပေါ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်ရေးသားခဲ့ပြီး ဗျည်းအက္ခရာ (၂၅) လုံးနှင့် သရအက္ခရာ (၁၂) လုံးပါဝင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပေါ်ထွန်းခဲ့သော ကရင်အမျိုးသား စာပေများအနက် ရှေးကျသော စာရေးနည်းနှင့် မျက်မှောက်တွင် ထွန်းကားနေသော စာရေးနည်းမှာ (၃) မျိုးခန့်သာ ရှိလေသည်။ ထိုစာပေ (၃) မျိုးမှာ မျက်မှောက်တွင် ရေးသား ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော `လိက်ထူ့လီ´ ခေါ် အရှေ့ပိုးကရင်စာပေ၊ စကောကရင်စာပေနှင့် အနောက်ပိုးကရင်စာတို့ဖြစ်သည်။ ကျန်သော စာပေအချို့တွင် သူ့ဒေသအလျောက် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအလိုက် သင်ကြားခြင်းလည်း ရှိလေသည်။ ရှေးကျ၍ လူအများ သုံးစွဲထွန်းကားနေသော စာရေးနည်းများအနက် မူလက `ဖူ့ဒိုက်ကော်´ တီထွင်ရေးသားခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘာသာ အရှေ့ပိုးကရင်စာပေသည် ကျယ်ပြန့်စွာ လွမ်းမိုးလျက်ရှိနေသည်။ ဖူ့ဒိုက်ကော်မှ အစပြုသော စာရေးနည်းဖြစ်သည့်အလျှောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ အရှေ့ပိုးကရင်တို့က `လိက်ထူ့လီအစ ဖူ့ဒိုက်ကော်က´ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ `ကရင်စာပေရှေ့ဆောင် ဖူ့ဒိုက်ကော်´ဟူ၍လည်းကောင်း ဂုဏ်ပြုကြသည်။
ဖူ့ဒိုက်ကော်တီထွင်ခဲ့သော စာရေးနည်းသည် ဖူ့ဒိုက်ကော်၏ ဘ၀ဖြစ်စဉ်နှင့် ကရင်စာပေသမိုင်းတို့တွင် ထင်ဟပ်
ဆက်စပ်လျက် ရှိလေသည်။ ဖူ့ဒိုက်ကော်၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြီးမားခြင်းကိုလည်း မျက်မှောက် အရှေ့ပိုးကရင်ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ နှလုံးသားတွင် ကိန်းဝပ်လျက်ရှိလေသည်။
စာပေကျမ်းဂန်ထွန်းကားခဲ့သော ကရဏ္ဏကတိုင်း၊ သုဓုမ်ပြည်နယ်၊ အုပ်စိုးသော မင်းအဆက်ဆက်၌ ခစားသော ကရင်အမျိုးသား ပညာရှိများလည်း အမြောက်အများရှိလေသည်။ အေဒီ (၅) ရာစုလောက်တွင် အုပ်စိုးသော မွန်မင်းလက်ထက်၌ အိန္ဒိယပြည်တောင်ပိုင်း ကဒမ္ဗအက္ခရာနှင့်ပလ္လ၀အက္ခရာများမှတဆင့် မွန်အက္ခရာစာပေကို
တီထွင်လာကြောင်း သုတေသီများက မှတ်ယူထားလေသည်။သုဓုမ်ပြည့်ရှင် မင်းသီဟရာဇာမင်းမှစ၍ (၅၇) ဆက်မြောက် မနူဟာမင်း ခေါ် သီရိတြိဘ၀နာဒိတျာပ၀ရ ဓမ္မရာဇာဘွဲ့ခံ မကုဋမနူဟာမင်းလက်ထက်တွင် ပညာရှိအမတ်ကြီးများရှိသည့်အနက် ကရဏ္ဏကတိုင်းသားပညာရှိ ကရင်အမျိုးသားအမတ်ကြီးတစ်ဦးလည်း ရှိလေသည်။
ထိုပညာရှိအမတ်ကြီးမှာ ဗညားဣန္ဒဘွဲ့ခံ မွန်အခေါ်အားဖြင့် `မွန်ဒိင်´ ဖြစ်သော ကရင်အမျိုးသား`ဖူ့ဒိုက်ကော်´ ပင်ဖြစ်သည်။
မနူဟာမင်းလက်ထက်တွင် ဆင်ဖြူတော် (၃၂) စီး၊ ပိဋကတ်အစုံ (၃၀) ရှိလေသည်။ သုဓုမ်ပြည်ရှိ မွန်ပညာရှိ ရဟန်းတော်များက မွန်စာပေကိုအဓိကထား၍ တစ်ပြည်လုံးတွင်
တိုးတက်ထွန်းကားအောင် သင်ကြားကြလေသည်။ ကရင်အမျိုးသားပညာရှိအမတ်သည် မွန်စာပေကို သင်ကြားတတ်မြောက်ပြီးနောက် ကရင်အမျိုးသားများ ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်များကို လေ့လာသင်ကြားနိုင်ရန် အကြံတော်ရပြီး ကရင်အက္ခရာစာလုံးများကို တီထွင်ရေးသားလေသည်။ဖူ့ဒိုက်ကော် တီထွင်ရေးသားခဲ့သော စာရေးနည်းသည် ဗြဟ္မီအက္ခရာ၊ ကဒမ္ဗအက္ခရာကိုအခြေခံပြီး ကရင်စကား၊ ကရင်အသံထွက်နိုင်အောင် ဗျည်းအက္ခရာများဖြည့်စွက်၍ ပြုစုခဲ့လေသည်။
အမတ်ပညာရှိ ဖူ့ဒိုက်ကော်သည် ကရင်သင်ပုန်းကြီးနှင့် အခြေခံသဒ္ဒါ သင်္ဂဟများကို မွန်စာပေနည်းတူ ကရင်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုရေးသားပြီး ပေရွက်ပေါ်တွင် အက္ခရာတင်ထားလေသည်။ကရဏ္ဏကတိုင်းရှိ ကရင်အမျိုးသားများကိုလည်း တစ်ဆင့်ဖြန့်၍ သင်ကြားလေသည်။အမတ်ပညာရှိ ဖူ့ဒိုက်ကော်သည် အချိန်အားလပ်တိုင်း ပိဋကတ်စာပေများကို ကရင်ဘာသာသို့ ကြိုးစားပြန်ဆိုရေးသားခဲ့လေသည်။ ပြန်ဆိုပြီးသမျှ ပိဋကတ်အစုံများကိုလည်း ပေရွက်ပေါ်တွင် အက္ခရာတင်၍ ရေးသားထားလေသည်။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၄၁၉-ခုနှစ်၊ (ခရစ်-ခုနှစ် ၁၆၅၇-ခု)တွင် ပုဂံပြည့်ရှင် အနိရုဒ္ဓဒေ၀ရာဇာဘွဲ့ခံ အနော်ရထာမင်းသည် ပိဋကတ်သုံးပုံစာပေကို အလိုရှိတော်မူ၍ မနူဟာမင်းထံ တောင်းဆိုလေရာ မနူဟာမင်းက ငြင်းဆန်တော်မူသဖြင့် ကိုယ်တော်တိုင် ဦးစီး၍ သုဓုမ်ပြည်ကြီးကို လာရောက်တိုက်ခိုက်လေသည်။ အနော်ရထာမင်း တိုက်ခိုက်၍ မနူဟာမင်း စစ်ရှုံးလေသည်။
အနော်ရထာမင်းသည် ဆင်ဖြူတော် (၃၂) စီးနှင့် ပိဋကတ်တော် အစုံသုံးဆယ်ကို ယူဆောင်သွားလေသည်။ စာပေကျမ်းဂန်တတ်မြောက်သော ရဟန်းသံဃာ (၁၀၀၀) ကျော်နှင့် မနူဟာမင်း၏ မှူးမတ်ဗိုလ်ပါများ၊ လက်မှု ပညာသည်များ လူပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်ကိုလည်း ပုဂံပြည်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်။
အနော်ရထာမင်း သုဓုမ်ပြည်ကို လာရောက်တိုက်ခိုက်ရာတွင် ကြိုတင်တွက်ဆထားသော ပညာရှိအမတ်ကြီး ဖူ့ဒိုက်ကော်က တပည့်များကို စည်းရုံးစေပြီး သူရေးသားထားသောစာပေများကို ထုပ်စည်းလျက် မြို့ကျလျှင် ထွက်ပြေးယူဆောင်ရန် ပြင်ဆင်ထားလေသည်။ အမတ်ကြီး ဖူ့ဒိုက်ကော် တွက်ဆထားသည့်အတိုင်းပင် မနူဟာမင်းစစ်သည်တော်တို့မှာ စစ်ရေးရှုံးနိမ့်မည့်အခြေအနေဆိုက်လေသည်။ ထို့ကြောင့် အနော်ရထာများစစ်သည်တော်များကို တိုက်ခိုက်၍ မြို့တံခါးပေါက်သည်နှင့် အမတ်ကြီးဖူ့ဒိုက်ကော်သည် တပည့်(၄၀) နှင့်အတူ ညအချိန်တွင် တိတ်တဆိတ်ထွက်သွားပြီး ဘင်လိုင်ချောင်းရိုးအတိုင်း အရှေ့ဘက်သို့ ထွက်ပြေးလေသည်။ (အချို့သော သမိုင်းအဆိုအရ အနော်ရထာမင်း စစ်အောင်၍ ပိဋကတ်ကျမ်းဂန် အတတ်ပညာရှိများ ခေါ်ဆောင်သွားလေရာ မွန်အမျိုးသား မဟုတ်သော ဖူ့ဒိုက်ကော်အား ခွင့်လွတ်ခဲ့သည် ဟု ဆိုလေသည်။ဤအဆိုိသည် ယုတ္တိ မရှိနိုင်ချေ။ ဖူ့ဒိုက်ကော်နှင့် တပည့်များ ထွက်ပြေးလွန်မြောက်သွားခြင်းက ပို၍ဖြစ်နိုင်လေသည်။)
သုဓုမ်ပြည်က ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသော ဖူ့ဒိုက်ကော်သည် မိမိအပင်ပန်းခံ ပြုစုရေးသားထားသော စာပေများကို တပည့်(၄၀) နှင့် အဆင့်ဆင့် သယ်ဆောင်လာခဲ့ရာ သံလွင်မြစ်ကို ဖြတ်ကူးပြီး ဒိုဟနတောင်တန်း ခေါ် ဒေါနတောင်တန်းခြေသို့ ရောက်ရှိသွားလေသည်။ထိုနေရာသည်လည်း လုံခြုံစိတ်ချရခြင်းမရှိ၍ နောက်ဆုံး ရှမ်းတို့နယ်(ယိုးဒယားနယ်) ကမ္ဗုရီ ခေါ် ဌာန်ဝကျောက်ခေါင်းအရပ်သို့ ရောက်ရှိသွားလေသည်။
ကရင်လူမျိုးတို့ သမိုင်းအရ ဌာန်ဝကျောက်ခေါင်းအရပ်သည် အဆက်ဆက်ကပင် ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထိုဒေသတွင် ယိုးဒယားလက်အောက်ခံ စော်ဘွားအဆင့် ´ဖရသုဝဏ်´ ဘွဲ့အမည်ခံ၍ အုပ်ချုပ်ကြောင်း ဆိုသည်။ သံလွင်မြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်းနှင့် ဇွဲကပင်တောင်ခြေရှိ ကရင်များ စစ်မက်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ထိုနယ်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရာတွင် ဖူ့ဒိုက်ကော်နှင့် တပည့်(၄၀) တို့ ရောက်ရှိသွားခြင်းမှာ ပထမအကြိမ်ဖြစ်သည်ဟု ကရင်ရာဇ၀င်၌ ဆိုထားလေသည်။ ကျောက်ခေါင်းနယ်သို့ ရောက်ရှိသွားသော ဖူ့ဒိုက်ကော်သည် ထိုနယ်ရှိ ကရင်အမျိုးသားများအား စာပေသင်ကြားပို့ချလေသည်။
ကျောက်ခေါင်းဒေသရှိ ကရင်အမျိုးသားများသည် ဖူ့ဒိုက်ကော် သင်ကြားပို့ချသော စာပေကို သင်ယူကြပြီး အဆက်မပြတ် တတ်မြောက်ခဲ့ရာ ယနေ့တိုင် ဖူ့ဒိုက်ကော် တီထွင်ရေးသားခဲ့သောစာပေကို တတ်မြောက်သူများ ရှိသောကြောင့် လေ့လာတွေ့ရှိရပေသည်။ အမတ်ကြီး ဖူ့ဒိုက်ကော်သည် ကျောက်ခေါင်းဒေသတွင် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့သည်။ ယင်းမရှိသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းပြုစုသောစာပေများကို အစဉ်အဆက် ဆက်လက်၍ သင်ကြားကြလေသည်။
သို့ရာတွင် ဖူ့ဒိုက်ကော် ကွယ်လွန်သော် စာပေအား စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းသူများ နည်းပါးလာသည်။ ထို့အပြင် ယိုးဒယားနိုင်ငံတွင် စစ်မက် မကြာမကြာဖြစ်ပွါး၍ ဌာန်ဝကျောက်ခေါင်းနယ်ရှိ ကရင်အမျိုးသားတို့သည် စစ်မက်ရှောင်တိမ်းရင်း ပြေးလွှားနေကြလျက်ရှိရာ စာပေများကိုလည်း မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘဲ ရှိလေသည်။ ဖူ့ဒိုက်ကော်သည် သူတီထွင် ရေးသားခဲ့သော စာပေများကို နောင်အရှည်သဖြင့် တည်တံ့စေရန် ၀ါးခြမ်းပြားကို စနစ်တကျ သပ်ပြီး ကျောဘက်တွင် ရေးသားလေသည်။
ထိုသို့ရေးသား၍ ကျမ်းတစ်စောင်ပြီးတိုင်း ၀ါးခြမ်းပြား မြောက်များစွာကို သီ၍ ထားရလေသည်။ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာပြောင်းရွှေ့လျှင် ဆင်နှင့်တင်ပြီး ယူဆောင်ရလေသည်။ ထိုသို့ ဆင်နှင့်တင်၍ ယူဆောင်သဖြင့် စစ်မက်ဖြစ်ပွါး၍ ရှောင်တိမ်းပြေးရာတွင် အကုန်အစင် ယူဆောင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဖူ့ဒိုက်ကော်စာပေသည် ပျောက်ပျက်၍ ပျက်စီးရလေသည်။
သို့ရာတွင် ဖူ့ဒိုက်ကော်၏ ကျေးဇူးသည် ကြီးမားစွာ ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ ဖူ့ဒိုက်ကော် ရေးသားထားသော ကရင်ဘာသာစာပေသည် ယခုလက်ရှိ ပိုးကရင်စာပေကိုလည်း `လိက်ထူ့လီ´ ရှေးဟောင်းစာပေအဖြစ် ဂုဏ်ယူခေါ်ဝေါ်ကြလေသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်တွင် ကရင်စာပေ ဖော်ထုတ်ရေး ကော်မတီ (သံဃာ့ကော်မတီ) က စာပေတိုးတက်မြင့်မားရေးကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ကရင်စာပေရှေ့ဆောင် ဖူ့ဒိုက်ကော်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးသည် ကြီးမားလှပေကြောင်း ဂုဏ်ပြုအပ်ပေသည်။
Posted by လါပုင်းဖါန် at 11:20 AM
ကရင်လူမျိုး၏ မူလဇာစ်မြစ် (၅)
ကရင်လူမျိုးများ မြစ်နှစ်မွှာဒေသ၊ မြေထဲပင်လယ် ဘက်မှ အရှေ့တောင်အာရှဘက်သို့ ပျံ့နှံ့လာသော အယူအဆကို အက်စ်ကေချာတာဂျီ (S.K. Chatterji) က ထောက်ခံ တင်ပြထားသည် (The history and culture of the Indian meoiib. vol. 1, p148 – 149)။
မြောက်ဘက်မှ တောင်ဘက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလာကြရာတွင် တရုတ်ပြည် အနောက်တောင်ဘက်ရှိ သံလွင်မြစ်၊ မဲခေါင်မြစ်၊ ယန်စီကျန် မြစ်ကြောင်းများအတိုင်း ပြောင်းရွှေ့လာပုံရသည်။ သံလွင်နှင့် မဲခေါင် မြစ်နှစ်ခု အနီးကပ်ဆုံးနေရာသည် (၁၀) မိုင်သာ ဝေးပြီး မဲခေါင်နှင့် ယန်စီကျန်မြစ် အနီးဆုံးနေရာသည် မိုင် (၅၀) ခန့်သာ ရှိသဖြင့် မနီးမဝေးရှိသော မြစ်ကြောင်း (၃) ကြောင်းမှ အာရှအရှေ့တောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာပုံရပါသည်။ ယန်စီကျန် မြစ်ဝပိုင်းနှင့် မြစ်ဝှမ်းအောက်ပိုင်းသည် ရေလွှမ်းမိုးသဖြင့် ထိုဒေသသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသွားသော ကရင်များသည် တောင်ဘက် ဗီယက်နမ်ရှိ မြစ်နီမြစ်ကြောင်းဖြင့်လည်း တောင်ဘက်သို့ ရွှေ့လာပုံရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကရင်လူမျိုးများ ၀င်ရောက်လာပုံမှာ လေ့လာရသမျှ ကြေးခေတ်ထွန်းကားချိန်တွင် တရုတ်ပြည် အနောက်တောင်ဘက် မှတဆင့် တရွေ့ရွေ့ ပြောင်းရွှေ့လာကြပြီး သံလွင်မြစ်၊ ရွှေလီမြစ် (မအိုက္လိုး) မှတဆင့် တကောင်းအရပ်သို့ ရောက်လာကြသည်ဟု ရှေးကရင် မှတ်တမ်းများအရ သိရှိရပါသည်။ တကောင်းအရပ်တွင် မြေပြန့်၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကောင်းပုံရသဖြင့် အခြေချ နေထိုင်ကြလေသည်။
တကောင်း ဟူသော အမည်မှာ ကရင်ဘာသာဖြင့် တူကော ဟုခေါ်သည်။ ရှမ်းဘာသာဖြင့် တာကော ဟု ခေါ်ပြီး ဖားစည်ဆိပ်ကမ်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ (တာ- ဆိပ်ကမ်း၊ ကော- စည်)။ ကရင်များ နတ်စည် ကဲ့သို့ တန်ခိုး ရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ရှမ်းများက မြစ်ကမ်းနားတွင် လာရောက်ရောင်းချကြသဖြင့် တာကော ဟု အမည်တွင်ရာမှ တကောင်းဟု ခေါ်တွင်လာခဲ့သည်ဟု အဆိုရှိလေသည်။
ပုသိမ်မြို့နှင့် ဆင်တူပါသည်။ ကရင်များက ပုသိမ် ဟုမခေါ်ဘဲ ပသိ ဟု ခေါ်ကြသည်။ ရှေးအခါက ကရင်များ နေထိုင်ရာ ဒေသသို့ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်ရန် ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ရောက်လာသော ပသိ လူမျိုးများကို အစွဲပြုပြီး ၎င်းတို့ ဈေးလာရောင်းဝယ်သော ကရင်တို့ နေထိုင်ရာ နေရာကို ပသိ ဟုခေါ်လာကြရာမှ ပုသိမ်ဟု တွင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ကရင်လူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့သို့ တသုတ်ပြီးတသုတ် ကြေးခေတ်ကတည်းက ၀င်ရောက်လာခဲ့ ကြသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတွင် ကရင် ဟူသော အမည်သည် ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ကွယ်နေပါသည်။ သဏ္ဍာန်အားဖြင့် အဝေး၌ စိမ်းလန်း မဲမှောင်နေသော သစ်တောကြီးတတောကို မြင်တွေ့ရ၏။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် သစ်တောကြီးရှိရာသို့ ရောက်လာပြီး သစ်တောအတွင်း ၀င်သွားသောအခါ ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ အင်ကြင်း၊ သစ်ယာ၊ ပိတောက်၊ ပျဉ်းမ စသည်ဖြင့် သစ်ပင်အမျိုးမျိုးကို တွေ့ရသဖြင့် အဝေးက မြင်တွေ့ခဲ့သော သစ်တောကြီး ဘယ်ရောက်သွားသည်ကို မသိတော့ဘဲ ပျောက်ကွယ်သကဲ့သို့ ဖြစ်ရပါသည်။
အမှန်အားဖြင့် ကရင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ယေရှုခရစ် မမွေးမီ ကြေးခေတ်ကတည်းက ပျံ့နှံ့လျက် ရှိနေကြပြီး ဖြစ်သည်။ အမည်အားဖြင့် စကော၊ ပိုး၊ ပအို (တောင်သူ)၊ ယင်းဖြူ၊ ယင်းနက်၊ ယင်းကြား၊ ပဒေါင်၊ ယင်းဘော်၊ ယင်းတလဲ၊ ဘွဲ၊ ပရဲ့၊ ဂယ်ခို၊ ဂယ်ဘား စသဖြင့် လူအမျိုးပေါင်းများစွာ အမည်ကွဲသွား သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အစောပိုင်း မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ပျူလူမျိုးရှိကြောင်း၊ အလွန်ယဉ်ကျေးကြောင်း၊ အဆင့်အတန်း မြင့်မားစွာ မြို့ပြနိုင်ငံများကို အေဒီ (၁) ရာစုတွင် တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပျူ ခေါ်သော လူမျိုး ဘယ်ကလာသလဲ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာသည်။ အခြေအမြစ် မသိသူအဖို့ မျက်စိလည်ရပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ကျောက်ခေတ်က အညာသား ယဉ်ကျေးမှု (Anyathian culture) ခေါ် ဧရာဝတီ ယဉ်ကျေးမှုသည် အညာအရပ်တွင် ပေါ်ခဲ့သည်။ ထိုကျောက်ခေတ်က လူသားများသည် သြစတြစ်အနွယ်ဝင်များအဖြစ် အဆင့်ဆင့် ရွေ့လျားသွားပြီး လက်ကျန်များအဖြစ် ဆလုံ၊ မလေး (နီဂရစ်တို) အဖြစ် တွေ့ရသည်။ ကရင်လူမျိုးများ ၀င်ရောက်စဉ် နိုင်ငံသည် အသစ်စက်စက်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ဤသည်ပင်လျှင် မြန်မာ့သမိုင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၌ ကွင်းဆက်ပြတ်နေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပေသည်။
ပျူသည် ဘာလူမျိုးလဲ။ ဘယ်က လာသလဲ။ အဖြေရှာကြည့် ကြပါစို့။ ပျူများသည် အသားမမဲသဖြင့် ကုလား မဖြစ်နိုင်။ ကပ္ပလီလည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပျူသည် အသားဝါသဖြင့် အသားဝါ အနွယ်ဝင် မွန်ဂိုလွိုက်များ ဖြစ်ကြသည်။ မွန်ဂိုအနွယ်ကြီးထဲမှာ ပျူအမည်ကို ရှာကြည့်ရာ၌လည်း ပျူဟူသော နာမည် မပါဝင်ပါ။ ဤသို့ဖြစ်လျှင် ပျူ ဘယ်က လာသလဲ။
အဖြေမှာ ရှင်းရှင်းကလေးပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကရင်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခရစ်တော် မမွေးဖွားမီ ကြေးခေတ်ကတည်းက နေရာအနှံ့ ပြန့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ကရင်အမည်ကို လေ့လာစဉ်က ဖခင်အနွယ် (စကော) ကရင်၊ မိခင်အနွယ် (ပ၀ိုး) ကရင်ဟု ခေါ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားသားများက ပ၀ိုး ကို ခေါ်၍ မပီသဖြင့် လည်းကောင်း၊ ခေါ်မတတ်၍ လည်းကောင်း ပ၀ိုးမှ ပျူသို့ အသံလှယ်သွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပျူသည် ကရင်ဖြစ်ပါသည်။ (တောင်ကြီးမြို့၊ သမိုင်းမွမ်းမံသင်တန်း တက်စဉ်က မန္တလေး တက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာနမှ သင်တန်းပို့ချသော တာဝန်ရှိ သမိုင်းဆရာတဦးအား မေးကြည့်ရာ ၎င်းက ပျူသည် ကရင်ဖြစ်သည်ဟု ပြောပါသည်။ ၎င်းသမိုင်းဆရာသည် ရှေးဟောင်းကျောက်စာ ပညာရှင်တဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ပျူတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာ တည်ဆောက်ပုံ၊ အရပ်အမောင်း၊ ဆံပင်၊ မျက်စိ၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အသားအရောင်သည် ကရင်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြသည်။ ထင်ရှားသော ပျူမင်းတပါး၏ အမည်သည် ပျူစောထီး ဟုခေါ်သည်။ ကရင် မှတ်တမ်းမှတ်ရာအရ စောဒီ ဟု ခေါ်ကြောင်း သိရသည်။
သို့ဖြစ်လျှင် ဟံသာဝတီ ပျူ (ဟန်လင်း) မင်း ၈၀၀။ တမ္ပဒီပ ပျူမင်း ၁၉၀။ မကရာ ပျူမင်း ၁၆၀။ ပင်လယ် ပျူမင်း ၆၇။ ကောင်းစင် ပျူမင်း ၃၀။ အလ္လကပ္ပ ပျူမင်း ၂၆။ ရွာပုကြီး ပျူမင်း ၅၀။ လယ်ကိုင်း ပျူမင်း ၄၀။ မင်းပေါင်း ၁၃၉၃ ပါး။
ရှေးဟောင်းစာဆိုအတိုင်း ယူရသော် ပျူမင်းဆက်များလည်း ရှားရှားပါးပါး မဟုတ်။ ဘုန်းဘောလအော ပင် ဖြစ်တော့သည်။ ပျူများသည် နေရာမလပ် အနှံ့ပင် ဖြစ်တော့သည်။
သို့သော် ရှေးဟောင်းစာဟောင်းကို အရူးခြင်းတောင်း သဖွယ်ထား၍ လစ်လျူရှုရမည်မှာလည်း အခက်ပင်ဖြစ်သည်။ စာဟောင်း၌ပါသော ဘုရင်အမည်များ၊ မြို့အမည်များ ယနေ့ထင်ရှားသော မြို့များ၏ စကားလုံးရင်းမြစ် ဖော်ပြချက်များ “ဥပမာ- မက္ခရာ၊ ပင်လယ်”၊ မင်းအရေအတွက် အသေအချာ ဖော်ပြချက်များကို ကြည့်ရခြင်းအားဖြင့် မဟုတ်ခါမှ လွဲရော၊ ရာဇ၀င်တန်ဘိုး မရှိသည့်တိုင်အောင် ရာဇပုံ (Tales of Kings) တန်ဘိုးအားဖြင့် မုချရှိသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ (မောင်ကန် ပျူ မြန်မာစွယ်စုံတွဲ ၂၊ စာ ၂၄၅)။
ဤမှန်နန်းရာဇ၀င် အထောက်အထားအရ ပျူများ မြန်မာပြည်အနှံ့ ရှိနေသည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယေရှုခရစ် မမွေးမီကတည်းက ကရင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများအပြား ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်သည်။
တဖန် မြန်မာ့သမိုင်း၌ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပျူ၊ ကမ်းယံ၊ သက် ကို ဖော်ပြရမည်ဆိုပါက ပျူသည် မိခင်အနွယ် ကရင်ဖြစ်ပြီး ကမ်းယံသည် ကရင်ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သက်မှာ အသံထွက် လှယ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာများက ဂ ကို သ သံ ထွက်လေ့ရှိသည်။ Samdoway ကို သံတွဲ၊ Salween ကို သံလွင်၊ Sarskrit ကို သံကရိုက် စသည်ဖြင့် အသံထွက်ကြသည်။ သက်မှာ စက်ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ (မြန်မာ့စွယ်စုံတွဲ ၁၊ စာ ၄၈၂၊ ဒုကော်လံ စာကြောင်း ၃၅၊ သက် Sak)။
မိခင်အနွယ်ဝင်ကရင်များ၏ အမည်ရှေ့၌ စက် (စဲ့) ရေးကြသည်။ ဆိုလိုသည်က မောင် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဥပမာ မောင်သန်းကျော် အစား စသန်းကျော် ဟု ရေးကြသည်။ ဖတ်လျှင် စက်သန်းကျော် ဟု ဖတ်ရသည်။ စသန်းကျော် ဟု ဖတ်လျှင် မှားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပျူ၊ ကမ်းယံ၊ သက်မှ သက်အမျိုးအနွယ်သည် မိခင်အနွယ်ဝင် ပ၀ိုးကရင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် သက်သည် ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်သွားသည်ဟု ပါရှိသည်။ ရှေးအခါက ရခိုင်ရိုးမတလျှောက်တွင် ကရင်လူမျိုးများသည် သံတွဲမှစ၍ တောင်စဉ်ခွန်နှစ်ခရိုင်၌ပင် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း မှန်နန်းရာဇ၀င်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ (မှန်နန်းရာဇ၀င်၊ စာ ၁၆၈၊ စာကြောင်း ၁၀)
ဟန်လင်း၊ ဗိဿနိုး၊ သရေခေတ္တရာ မြို့နိုင်ငံများ၌ မြို့တည်ထောင်ပုံ၊ အဆောက်အဦး တည်ဆောက်ပုံနှင့် အုပ်ချုပ်ပုံစနစ်များသည် မက်ဆိုပိုတေးမီးယား ဒေသမှလာသော အသိပညာများ ဖြစ်နီုင်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော သမိုင်းကွင်းဆက်ဖြစ်ပါသည်။ ဆူးမားရီးယန်း (Sumerians) များသည် အုတ်ဖုတ်သော အတတ်ကို သိရှိလာကြပြီးဖြစ်သည်။ ဆူးမားရီးယန်းမှ တဆင့်ရခဲ့သော အတတ်ပညာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ကရင်အများအပြား ရှိသည်။ စကောကရင်၊ ပိုးရင်များ ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်က သာသနာပြု ဆရာလူးရွှေ၏ မှတ်တမ်းအရ ဇင်းမယ်မြို့မှ မြန်မာနယ်စပ်အထိ ကရင်ရွာပေါင်း ထောင်ချီ၍ ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဇင်းမယ်သည် ပြည်၊ တောင်ငူ မြို့တို့နှင့် အရှေ့အနောက် တတန်းတည်း၌ ရှိသည်။ မဲပီ၊ မဲနန်မှ သူးမွဲကလိုး၊ ကန်သူရိ အထိ ကရင်ရွာပေါင်းများစွာနှင့် ကရင်လူဦးရေ ၃၀၀၀၀၀ (သုံးသိန်း) ခန့်ရှိသည်။ မဲနန်နှင့် မဲခေါင်မြစ် ကြားတလျှောက်မှာလည်း ကရင်ရွာပေါင်း များစွာရှိ၍ တောခေါင်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြသော ကရင်များပိုင် ဆင်အစီးပေါင်း ၅၀၀ မှ ၁၁၀၀ ကြားမှာ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ လူအချို့သည် တဦးတည်းပင် ဆင်အစီးပေါင်း ၄၀ မှ ၅၀ အထိ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဘန်ကောက်မြို့ အနီး ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း ဆင်အစီး ၅၀ ပိုင်သော ကရင်လူမျိုးများ ရှိကြသည်။ စကောအနွယ်၊ ပိုးအနွယ်၊ တောင်ငူအရှေ့တွင် ဘွဲကရင်များ အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။
ဤမှတ်တမ်းသည် လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၄၀ က မှတ်တမ်းဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀ နှစ်ကျော် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကရင်လူမျိုးများအကြောင်း လေ့လာခဲ့သော ဂျိမ်းစ် ဒဗလျူ ဟာမီတန် (James W. Hamilton) က ထိုင်းတွင် ကရင်လူမျိုးသည် ဒုတိယ လူဦးရေ အများဆုံးဟု ဖော်ပြထားသည်။ (Pwo Karen by James W. Hamilton, 1976. page5… Which makes the Karen the largest non. Thai group in Thailand)
ကရင်လူမျိုးများ ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ရှိနိုင်ကြောင်းကို မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းအတိုင်း လိုက်လာသော ကရင်များကို ပြန်လေ့လာကြည့်က သိနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကရင်များလည်း ရောက်မည်မှာ အမှန်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းက အင်ဒိုချိုင်းနား၏ ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် အိန္ဒိယပြည်မှ အခေါ်အဝေါ်မျိုးဖြစ်သော စမ္ပါပြည်၊ ကမ္ဗောဇပြည် ဟူ၍ရှိရာ ၎င်းကမ္ဗောဇပြည်သည် ကမ်ပူးခြားပြည်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်အခါက ထိုင်း (ယိုးဒယား) နိုင်ငံဟူ၍ မရှိသေးဘဲ ကမ္ဗောဇနိုင်ငံထဲတွင် ယိုးဒယားလည်း ပါဝင်သည် (Marcopolo by Horris Collis, ဦးလှဒင် မြန်မာပြန်၊ စာ ၂၁၆)။ ထိုကဲ့သို့ ကမ်ပူးခြားနှင့် ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ တပေါင်းတည်းဖြစ်၍ ကရင်များလည်း ကမ်ပူးခြား နိုင်ငံထဲသို့ သွားလာ ၀င်ထွက်ကာ အိုးအိမ်ထူထောင်နေကြမည်သာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒေါက်တာဗင်တန် သာသနာပြုစဉ်က ကမ္ဘောဒီးယားမှ ကရင်လူမျိုးများသည် ဒေါက်တာဗင်တန်နှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ (The Loyal Karens of Burma by D.M. Smeaton, 1920, page 137, A party of Karens once came to Dr. Vinton in Rangoon from the Cambodia.)
ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွင် ကရင်အမျိုးအနွယ်များ ရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့မှာ ယောင်၊ မြောင် တို့ဖြစ်ကြပြီး ကရင်ယဉ်ကျေးမှု အသုံးအဆောင်များကိုလည်း ဟနွိုင်မြို့ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်တွင် မြင်တွေ့နိုင်သည်။ (The New Encyclopedia Britannica, vol 19, 15th edition 1974, Victman, North. page 133, 1st col. … The Nuong – Ya’o and the Meo, whose villages are found above the 3000 foot level.)
ဤကျွန်းတွင် အင်ဒီးယန်းသွေးပါသော ဒယက် (Dyaks) များ တွေ့ရသကဲ့သို့ ကရင်အမျိုးအနွယ် ကယမ် (Kayans, Kenyahs) များကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ၎င်း ကယမ်များကို ဗိုလ်မှူးဘရှင်က ဒယက်နှင့် လွဲမှားဖော်ပြခဲ့သည်။ ကယမ်သည် အသားဝါအနွယ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ပုံကိုလည်း Compton’s Picture Encyclopedia, vol 2, 1956, page 256 တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤစွယ်စုံကျမ်း စာမျက်နှာ ၂၅၄ တွင် (Borneo – The vast and savage island of Dyaks … Other tribes are Kayans, Konyahs.) ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဤအဆိုကိုလည်း ဟို့စ် (Mr. Hose) နှင့် မက်ဒေါဂယ် (Mr. Mc Dougall) တို့က ထောက်ခံတင်ပြထားပါသည်။ (The open mind, vol 3, No. 10 August, 1963. The Karens. Their origin and early movement, by Saw Hanson Tadaw, M.A. London … Mr. Hose and Mr. Cc Dongall went furtherafield to trace their origins of the Karens. They maintained that the Kayans of Borneo and the tribes of Karen in Burma are related)
ကရင်လူမျိုးများသည် အသားဝါ မွန်ဂိုနွယ်ဝင်များ ဖြစ်သည်။ မြစ်ဝှမ်းယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားသောအခါ အာရှတိုက် အလယ်ပိုင်းမှ မြေသြဇာကောင်းသော မြစ်နှစ်မွှာ မြစ်ဝှမ်းဒေသ (သို့မဟုတ်) ရှိနလွင်ပြင်သို့ ရောက်ရှိပြီး မြစ်ဝှမ်းအောက်ပိုင်းလောက်တွင် နေထိုင်၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမှ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့် မြင့်မားလာသည်ဟု ယူဆရပါသည်။ သို့သော် ထိုဒေသတွင် ငြိမ်သက်မှု မရှိသဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ နေလိုသော ကရင်တို့သည် ယူဖရေးတီးမြစ်မှ တဆင့် ကော့ကေးဆပ် တောင်တန်း၊ ထီးဆဲ့မဲ့ယွာ၊ တိဘက် ကုန်းပြင်မြင့်၊ အာရှတိုက် အလယ်ပိုင်းသို့ အဆင့်ဆင့် ရောက်ရှိလာကြသည်။
တဖန် သံလွင်၊ မဲခေါင်၊ ယန်စီကျန် မြစ်များမှတဆင့် အင်ဒိုချိုင်းနား ကျွန်းဆွယ်ရှိ မြန်မာ၊ လော၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ်ပူးခြား၊ ယိုးဒယားနှင့် မလေးကျွန်းဆွယ်ကို သော်လည်းကောင်း၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ကျော်၍ ဘော်နီယိုကျွန်းသို့တိုင် ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ယခုအခါတွင် ကရင်လူမျိုးများကို မြန်မာနှင့် ယိုးဒယားနိုင်ငံတို့တွင် အများဆုံး တွေ့ရှိရပါသည်။
ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ (မဟာရန်ကုန်) ၏ နံရံကပ်စာစောင်တွင် ဖော်ပြထားသည့် သုတေသန စာတမ်းတခုကို ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မူရင်း။ ။ Zwekabin.org မှ ပြန်လည်ဖော်ပြပါတယ်
Posted by လါပုင်းဖါန် at 10:47 AM
တစ်ယောက်လာပီးပြောသွားလိုက် နှစ်ယောက်လာပီးပြောသွားလိုက်နဲ့ နဲ့မလို့ပါ တစ်ယောက်လာပြောပျံပီ အကောင့်သူများခိုးသွားလို့တဲ့ တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ့်အကောင့်ကို ဘယ်သူမှမခိုးပါဘူး ခိုးပီးတော့ကောဘာလုပ်မှာလည်း တစ်ချို့ကတော့ ထောက်ချောက်ဆင်တက်ကြတယ် အဲ့ဒါကတော့ Gmail အတုတွေရယ် Mail ထဲဝင်လာတဲ့ Mail ကို Recover လုပ်မလားဆိုတဲ့မေးကို သွားဖွင့်ပီးတော့ UserName နဲ့ Password ကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ KeyLogger ကိုစက်ထည်းသွင်းထားလို့ဖြစ်ပါတယ် တကယ်တမ်းတော့ အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာ အလှူလာခံကြတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ (User Name နဲ့ Password အလှူခံသည်)အဲ့လိုအော်ပီးတော့ကိုဝင်လာကြတာပါ
ကိုယ့်က သွားလှူလိုက်တော့ ပါသွားတာပေါ့လေ ဟိဟိ ပြောတဲ့လူတွေများလာတော့လည်း မရေးမဖစ်ရေးမှရတော့မှာမလို့ ရေးပါတော့မယ် ။
အကောင့်ကပျောက်တာမဟုတ်ပါဘူး ခိုးခံရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး သူငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်က လိုက်လိုက်လဲလဲ ပေးမိလိုက်တာပါ
အဲ့ဒါကို သူငယ်ချင်းကိုတိုင်က မသိလိုက်တာပါ တစ်ချို့တွေကပိတ်ဖို့မေ့ခဲ့ကြတာပါ Gmail ပိတ်ဖို့မေ့ခဲ့ရင်တော့ဖြင့်(သို့မဟုတ်)Remember ပေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် Browser ထဲမှကျန်ခဲ့တက်ပါတယ်
Gtalk ပိတ်ဖို့မေ့သွားရင်တော့ ယူတဲ့သူကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ ယူလို့မရပါဘူး ဒါပေမယ့်ယူလို့ရပါတယ် Password See Software တွေရယ် Gtalk Password Recover Software တွေကိုအသုံးပြုရပါတယ် Password See Software ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဖြင့် တစ်ခါ တစ်ခါ ကွန်နရှင်ကျခဲ့ရင် Gtalk ကအော်တိုပြန်အောက်သွားပါတယ် UserName နဲ့ Password ပြန်ပေါ်လာပါတယ် အဲ့အချိန်မှာ Password See Software တစ်ခုခုကို Gtalk ပေါ်မှာထောက်လိုက်တာနဲ့ Password ကိုတွေ့ရပါတယ် ကွန်နရှင်မကျမချင်းထိုင်စောင့်ပီးတော့ ယူမှရမှာပေါ့လို့ စဉ်းစားမိပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် My Network Place ကနေ Disable ပေးလိုက်ရင် ကွန်နရှင်ကျတာနဲကတူတူပါပဲ နောက်တစ်ခုကို Gtalk Proxy ကို မရှိတဲ့ Proxy တစ်ခုခုရှောက်ထည့်လိုက်ရင်လည်း ကွန်နရှင်ကျသွားတာနဲ့အတူတူပါပဲ
Gtalk Password Recover Software ကိုသုံးတာကတော့ အဲ့ Software တွေမှာ Scan ဖတ်တာပါပါတယ် လောလောဆယ်ဖွင့်ထားတဲ့ Gtalk အကောင့်က Password ကို Scan ဖတ်ပီးတော့ယူသွားပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ပိုလွယ်တာပေါ့ တစ်ချို့ဆိုရင် ကြိုတင်စည်စဉ်လာကြတယ်လေ အဲ့ Software လေးတွေကို Portable Version အဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ် ပီးတော့ ကွန်ပျူတာနားမှာ စတစ်လေးထိုးပီးတော့ ယူသွားယုံပဲပေါ့ ဒါကသူငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်လှူခဲ့လို့ပါ ဟိုတစ်ယောက်ကလည်း ဒါနမြောက်အောင်ယူသွားတာပေါ့လေ ဒါပေမယ့် အဲ့ရန်တွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ အောက်မှာမှော်မှော်ရေးပေးမယ်နော် အဲ့ဆိုရင် အေးဆေးပဲ ခဏလှူလိုက်မယ် ပီးတော့ပြန်ယူမယ် မီးကိုကစားကမကောင်းဘူးလို့တော့ပြောခြင်တယ်နော် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကိုယ့်ထပ်တော်တဲ့သူ တက်တဲ့သူတွေ အများအပြားရှိသလို ကိုယ်လောက်မတက်ခဲ့ရင်လည်း ရှောက်ဆဲခဲ့ မေးတွေရှောက်ဖြတ်ခဲ့ရယ် ဘယ်လိုလုပ်မလည်း ပီးတော့ အကောင့်ကို ပြန်မရခဲ့ရင်မှော်မှော်ကတော့ တော့တာဝန်ယူဘူးနော် တစ်ချို့တွေက မဆင်မခြင်ဖွင့်လိုက်တာပါ ဥပမာနေရာနှစ်ခု ကိုတစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ freedom Software လေးကိုသုံးဖူးကြရင်တော့သိမှာပါ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့က Freedom ကိုသုံးပီးပတ်မသွားပါဘူး ဒါကြောင့်နောက်လူက လာပီးသူ့အကောင့်ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Disable ဖြစ်ရောလေ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ Freedom ကသူများနိုင်ငံ proxy ကိုသုံးတာပါ ဥပမာ US Proxy ကိုသုံးတယ်ထား User တစ်ယောက်က တခြားဆိုင်မှာ မြန်မာ Proxy နဲ့သုံးလာပါတယ် ပီးတော့ ဒီဆိုင်မှာ US Proxy ကိုသုံးမိလိုက်တယ် အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလည်း အဲ့အကောင့်က ခုနက မြန်မာမှာ အခုချက်ခြင်းပဲ US ကိုရောက်နေတယ် ဆိုတော့ Google Server ကမယုံတင်ကာဖြစ်ပီးတော့ ဖြတ်လိုက်တာပေါ့ အဲ့ဒါနဲ့ အကောင့်လေးက ပျက်သွားရောပေါ့ အကယ်၍ သုံးခြင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ Proxy နှစ်ခု အပြောင်းအလဲလုပ်မယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး နှစ်နာရီခြားပါ ပီးတော့ Gmail အတုနဲ့တွေ့လိုက်ရင်တော့ Password ပါသွားတာပေါ့ တကယ်တမ်းတော့ Gmail မှာ Password ကအဓိကလုံခြုံရေးစနစ်မဟုတ်ပါဘူး လုံခြုံရေးစနစ်အဓိက သုံးခုရှိပါတယ် အောက်မှာပြောပြသွားပါမယ် Gmail Password ပျောက်သွားလို့ Gmail အကောင့်တစ်ခုဆုံးရှုံးသွားပီလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ပြန်ယူလို့ရပါတယ် ပြန်ယူနည်းသုံးနည်းရှိပါတယ် အဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြပါမယ် Disable ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့ 24 နာရီစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ ပီးရင် ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါမရလျှင် နောက်ဆုံးတစ်နည်းတော့ကျန်ပါသေးတယ် ရမရတော့အာမမခံပါဘူး ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မှော်မှော် စမ်းတာ တစ်ချို့အကောင့်တွေ ပြန်မရခဲ့ပါဘူး တစ်ချို့အကောင့်တွေတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ရပါတယ် ကဲသင်ခန်းစာလေးစလိုက်ရအောင်
Gmail Recover လုပ်ထားပါ
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ Password ပြန်ယူရာမှာ Recover မလုပ်ထားပါက ပြန်ယူလို့ရမယ်မဟုတ်ပါ အဲ့ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကာကွယ်နည်းကို ပြေပြပါမယ် အခြားမေးတွေ အကောင့်တွေမှာလည်း Recover ဆိ်ုတာရှိကြပါတယ် သူ့နည်းနဲ့သူပေါ့ Gmail Recover လုပ်နည်းသုံးနည်းကိုပြောပြပါမယ် အဲ့ဒါတွေက တကယ်တမ်းတော့ အကောင့်စလုပ်ကတည်းကလုပ်ထားရမှာပါ ဒါပေမယ့် အကောင့်ရှိပီးသားသူတွေအတွက် အရင်ရေးပေးပါမယ် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အကောင့်အသစ်လုပ်ရန်အလွန်ခတ်ခဲသွားပီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
Gmail Recover လုပ်နည်း
အခြား Gmail အကောင့်နှင့် Recover လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အကောင့်နှစ်ခုရှိတဲ့သူများအတွက်ပိုအဆင်ပြေပါတယ် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လူ့စိတ်ကမျောက်စိတ်လိုပဲလေ သူများအကောင့်ကို Recover ပေးထားမိရင် ဖြတ်လိုက်ပါ အဲ့ Recover ပေးခံထားရတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်က သူငယ်ချင်းတို့အကောင့်ကို အချိန်မရွှေး တစ်ရေးနိုးထပီးတော့ Password ကိုပြောင်းပစ်လို့ရပါတယ် အကောင့်နှစ်ခုပိုင်ထားသူများကတော့ အကောင့်အချင်းချင်း Recover ပေးထားလို့ရပါတယ် အဲ့ဒါအဆင်ပြေတာပေါ့ Gmail ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါ ပီးရင် Setting >> Accounts and Import >> Google Account Settings ကိုနှိပ်လိုက်ပါ အဲ့ဆို အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါသည် အဲ့နားမှာ Your recovery email adresses: နားက Edit ကိုနှပ်ပီး သူငယ်ချင်း Recover လုပ်မယ့်မေးကို ထည့်လိုက်ပါ ပီးရင် Security question ကိုပါပြင်ပါမယ် အောက်နားက Edit ကိုနှိပ်ပီး ကြိုက်တာပြင်လို့ရပါတယ် ဥပမာ မေခွန်းက What is your father's middle name ထားလိုက် အဖြေကို I go to school hehehe 12345 အဲ့လိုရှောက်ဖြေလို့ရပါတယ် အဲ့တော့ မှန်းရခတ်တဲ့ တာပေါ့ အဲ့တော့ပိုလုံခြုံတယ်လေ တစ်ခုကြားဖြတ်ပြောမယ်နော် Gmail Password ပေးမယ်ဆိုရင် မြို့နာမည် တို့ မွေးနေ့တို့ ကိုယ့်နာမည်တို့ကို မပေးတာကောင်းပါတယ် ပီးတော့ နံပါတယ် တွေပေါ့ ဥပမာ တစ်ခုပေးပြမယ်နော် 123hell0he44y749 အဲ့လို ပေါက်တက်ကရပေးတာ ကောင်းပါတယ် Password Creaker Software တွေကို လှည့်စားတဲ့သဘောပေါ့ အဲ့လိုပေးရင် Password Creaker Software တို့ Web Mail hack Software တို့ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ ပိုပီးလှုံခြုံတာပေါ့လေ ပီးတော့ တစ်လုံးခြင်းအဓိပါယ်ရှိတဲ့စာလုံးတွေ everything အဲ့လိုတွေမပေးသင့်ပါဘူး ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ Password Creaker Software တစ်ချို့က Dictionary တွေနဲ့တိုက်စစ်လို့ရတယ်လေ အဲ့တော့ ချက်ချင်း Password ကိုသိသွားရောပေါ့ ပြောရင်နဲ့ဘယ်ရောက်သွားလည်းသိဝူး အပေါ်ကပြန်ဖတ်လိုက်ဦးမယ် မှန်မိပီ အကုန်ပီးရင် Save လိုက်ပါ အဲ့ဆိုရင် Recover လုပ်ငန်းပီးဆုံးသွားပါပီ အဲ့ဒါက အကောင့်ကို Recover လုပ်နည်းနှစ်နည်းပါ နောက်တစ်နည်ကတော့ နောက်ပိုစ်တစ်ခုမှာရေးပေးပါမယ် Password ပြန်ယူတဲ့နည်းကောပေါ့ မှော်မှော်မောပီ ဆက်ရန် ဟယ်ဟယ် ကိုရီးယားဇတ်လမ်းတွဲတော့ဟုတ်ဝူးနော် တစ်ခုလောက်တော့ကြော်ဌှာဝင်ထားမှရမယ် Gmail ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးနေတာပါ သူများနိုင်ငံကဘာမှကိုမဖြစ်ပါဘူး မြန်မာနိုင့်ငံကပဲ ဟက်ခံရတာနဲ့ ဘာနဲ့ညာနဲ့ဆိုတော့ မြန်မာက ဟက်ကာတွေ ခရက်ကာတွေက သူများနိုင်ငံထပ်ပိုတော်တယ်ထင်တယ်နော် အဲ့ဒါလေးပါ ဖြေပေးခဲနော့ ကျန်တာတော့ နောက်ပိုစ်တစ်ခုနဲ့ဆက်ရေးပေးမှာပါ နော်
အရင်ပိုစ့်ကအတိုင်း Recover လုပ်ပီးပါက ပြန်ယူလို့ရပါတယ်
ပြန်ယူမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Gmail Signin လုပ်မယ့်နေရာကို
သွားလိုက်ပါ ပိးတော့ Signin ၀င်မယ့်အောက်နားလေးမှာ
Can't access your account? ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ
အဲ့နားရောက်ရင် Email address ဆိုတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
သူငယ်ချင်းရဲ့ Gmail address ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ ပီးရင်
အဲ့အောက်ရောက်ရင် Email to ******@g*****.com
ဆိုတာက သူငယ်ချင်းရဲ့ password အသစ်ကိုပြောင်းလို့ရမယ့်လင့်ကို Recover
လစ်ပေးပီးတော့ Continue ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Recover mail
ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ဒုတိယတစ်ကြောင်း Answer your
security question ကတော့ Password ကို အရင်ပေးထားတဲ့
Security Quertion နဲ့အသစ်ကိုပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်
ကလစ်လေးပေးပီးတော့ Continue ကိုနှိပ်လိုကတာနှင့်
အဖြေထည့်ပေးရမယ့် Box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်
ထည့်ပေးပီးတော့ Continue နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Password
တတိယတစ်ကြောင်း အလွန်အရေးကြီးပါသည် သူရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းရည်တော်တော်မြင့်ပါသည် အဆုံးအထိတော့ဖတ်လိုက်ပါ လို့မှော်မှော်ပြောပါရစေ I no
longer have access to these ဆိုတာလေးကို
ကလစ်လေးပေးပီးတော့ Conitinue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောက်မှာပြထားတဲ့ Box လေးတစ်ခုကျလာပါလိမ့်မည်
အပေါ်နည်းတွေမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ဒီနည်းလေးကတော့
အောင်မြင်မှာပါ မအောင်မြင်တော့ သူငယ်ချင်းမေးလေးကို
လွတ်သာလွတ်လိုက်တော့ပေါ့နော် တစ်ခုရှိပါတယ် Disable
ဖြစ်သွားတဲ့မေး တစ်ချို့ကို သည်နည်းလေးနဲ့ယူလို့ရနိုင်ပါတယ် အကယ်၍ မကျလာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့
ဒါလေးက အဲ့ပိုစ်ကို သွားမယ့်လင့်လေးပါ နှိပ်လိုက်ပါ
အဲ့ဒါမှမကျလာသေးဘူးဆိုရင် 24 နာရီစောင့်ရမှာဖြစ်ပါသည် အမှန်တစ်ကယ်က ကထမနည်းကို စမ်းပီးရင် 24 နာရီးစောင့်ပီးမှာ ဒုတိယနည်းကို စမ်းပါ ဒုတိယနည်းနဲ့ တတိယနည်းလည်း 24 နာရီခြားပါ မခြားခဲ့ဘူးဆိုရင် ကံဆိုးရင် တော့ မေးလေးက disable ဖြစ်သွားတက်ပါတယ် အဲ့ဆိုရင်တော့ မေးကို ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ပထမဆုံးက ကိုယ်သူငယ်ချင်းရဲ့မေးတစ်ခုခုကို ခနငှားပီးတော့ An
email adress we can use to contact you*
ဆိုတဲ့အကွက်လေးထဲမှာ ထည့်လိုပ်ပါ အဲ့မေးကို သူက Password
ပြောင်းမယ့် လင့်ကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါသည် ပီးရင် အောက်နားလေးက
I am unable to reset my password ဆိုတာလေးကို
ကလစ်ပေးလိုက်ပါ ပီးရင်အောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားပါ Product
information အောက်နားက Do you use Gmail with this
account?* ဆိုတဲ့နေရာမှာ Yes ကိုရွှေးပေးလိုက်ပါ ပီးရင်
အဲ့နားမှာ ကိုပျောက်သွားတဲ့မေးလိပ်စာကိုထည့်လိုက်ပါ ပီးလျှင် အောက်နားမှာ Do you haveaverification code? ဆိုတာလေးပေါ့ အဲ့ဒါကအကောင့်လုပ်ကတည်းက recover mail ပေးပီးတော့ လုပ်ထားမှရပါတယ် အဲ့ကုတ်လေးကို သိရင်တော့ ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့ မသိရင်လည်း ထားခဲ့လို့ရပါတယ် ပီးလျှင် Email adresses of up to five frequently emailed contacts: ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်အကောင့် လုပ်တုန်းက ထိပ်ဆုံ အပ်တဲ့သူ သို့မဟုတ် ထိပ်ဆုံးမေးပို့ တဲ့သူ တစ်ယောက်ရဲ့ အကောင့်ကို ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပီးရင် Other account information ဆိုတာလေးကိုဖြေရပါမယ်
Account creation date* အကောင့် လုပ်ခဲ့တဲ့ လနဲ့နှစ်ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ ပီးရင် Last successful login date ဆိုတာက နောက်ဆုံး ဖွင့်ခဲ့တဲ့နေ့ကို ထည့်ပေးရပါမယ် အတိအကျထည့်ပေးရပါမယ် မသိရင်တော့ ထားခဲ့လိုက်ပါ ပီးရင် password အဟောင်းကို last password you remember* အဲ့အကွက်လေးထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါ ပီးရင် Submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ နည်းနည်းလေးကြာရင်တော့ သင် ထိပ်ဆုံးမှာထည့်ထားတဲ့မေးထဲကို Password အသစ်ပြောင်းမယ် လင့်လေးရောက်လာပါလိမ့်မယ် အဲ့မှာပြောင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပီ ဒီနည်းလေးက ကိုယ့်အကောင့် အခိုးခံရသူတွေအတွက် လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ်ပဲသိနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေပဲဖြစ်လို့ပါ ဒါလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ပါ တစ်ချို့တွေက အကောင့်ကို ခိုးပီးတော့ recover mail ပြင်လိုက်မယ် sercurity question တွေပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် တော့ မရတော့ဘူး ဆိုပီးစိတ်ဓာတ်တော့မကျလိုက်ပါနဲ့ ဒီတတိယနည်းကို ကောင်းကောင်း သိထားမယ်ဆိုရင် ကြိုက်တဲ့ ဟက်ကာလာ ကြိုက်တဲ့ ခရပ်ကာလာ ဘာမှကိုကြောက်စရာမလိုဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့က ဒါတွေကိုမမပြင်နိုင်တာ ပြင်နိုင်တဲ့ ခရပ်ကာဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့လေ ဒါပေမယ့် သူတို့ပြင်သည်ထားအုံး လုပ်လို့ရပါသေးတယ် ပြသနာမရှိပါဘူး Gmail Password မေ့ခြင်းနှင့် အခိုးခံရခြင်း အန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းရင်း ... အိပ်ပျော်သွားပါပီ ဟိဟ
Posted by လါပုင်းဖါန် at 12:21 AM
Folder မ Lock ဘဲ့နဲ့ Folder ဖျောက်မယ်
ကဲ စာဖတ်သူတို့ရေ..ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ Folder မ Lock ဘဲ့နဲ့ Folder ဖျောက်မယ်တဲ့ ။ ဟီး ဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော် ။ ဒါပေမယ့် တကယ်နော်...စာဖတ်သူတို့ရေ...စမ်းကြည့်လိုက်ပါလား ။ ကြိုက်သွားစေရမယ် :), Post ကိုပြောတာ ။
ကဲ ပထမဆုံး New Folder တစ်ခု ယူရအောင်....
နာမည်မပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.....စာလုံးမပါတဲ့ နာမည်ကို ပြောင်းရမှာပေါ့....။ ရှိလောက်ပါဘူးနော်.. ဟီး....ဆက်မယ်
Run Box ထဲမှာ ဒီစာသားလေး ရိုက်ထည့်လိုက်.....charmap
ကဲ ခဏလေးစောင့်....ဂလိုတက်လာမယ်....အဲဂလိုတက်လာရင် အဲဂလိုလုပ်လိုက် ပြောတော့ဘူး..လွယ်လို့
ကဲ..ကော်ပီပြီးပြီဆိုရင်တော့....နာမည်ပြောင်းပြီးတော့ ကော်ပီထားတာလေးကို ထည့်မယ်....
ပြီးရင် နာမည် ပါတော့ဘူးနော် Folderမှာ ဂလိုမျိုး...
နာမည်တော့ မပါတော့ဘူး...တကယ်ပျောက်သွားအောင် ဆက်ဖျောက်မယ်...
Right လင့် အောက်ဆုံက အတန်းလေးကို ရွေးလိုက် Properties ပါ ။
ကဲ icon ပြောင်းမယ်....
ခုလည်း အပုံမပေါ်တဲ့ icon ကို ရွေးလိုက်ပါ ။
ကဲ ပြီးရင် အိုခေ လိုက်...ဆက်တိုက် Properties မှာလည်း အိုခေ လိုက် ။ ပျောက်သွားပြီ ဟုတ် ...
အဆင်ပြေပြေနဲ့ စမ်းနိုင်ကြပါစေ ဆက်လက် ရှာဖွေပေးဦးမယ် :)
Posted by လါပုင်းဖါန် at 12:12 AM
©2011 - လါပုင်းဖါန် | Design by: O Pregador | Powered: Blogger Templates